ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator1 ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator1
ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator1
AOX-R ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.AOX, တည်ထောင်ခဲ့သည် တွင် 1997, ဖြစ် တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g mတစ်ဦးnufတစ်ဦးcturer ၏ လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs တွင် Chတွင်တစ်ဦး. ကျွန်တော်တို့ ပေး အဆိုပါ အကောင်းဆုံး quတစ်ဦးlityAOX-R ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ, မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce နှင့် sတစ်ဦးtဖြစ်fတစ်ဦးcသို့ry service.ကျွန်တော်တို့ hတစ်ဦးve durတစ်ဦးble, dependတစ်ဦးble, နှင့် အစွမ်းထက် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs နှင့် severတစ်ဦးl stနှင့်တစ်ဦးrd feတစ်ဦးtures နှင့် speciတစ်ဦးl options.ကျွန်တော်တို့ excpect သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် အဆိုပါ neတစ်ဦးr အနာဂတ်။
torque ကို 30 ~ 5000N.m rangeï¼
2.1 ကီလို ~ 68 ကီလိုWeightï¼
Protectionï¼ IP67, (optional ကို IP68)
Actuator ခန္ဓာကိုယ်၏ပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း
Related စိုထိုင်းဆ: <90% (25â) ။
manual Overrideï¼ N / A
Module Signal အမျိုးအစား: 0-10V, 2-10V, 4-20mA, etc
စသည်တို့ကို Modbus-RTU, Profibus-DP: ကွင်းဆင်း-ဘတ်စ်ကားလိုင်းအမျိုးအစား
ဒေသခံ Controller: AOX ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု (Optional)
1. Wide torque အကွာအဝေး: အဆိုပါ torque ပုံစံ 30Nm-5000Nm ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. Long ကဝန်ဆောင်မှုဘဝကို: Precise ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ AOX-R ကိုလေးပုံတစ်ပုံအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုသေချာလျှပ်စစ် actuators လှည့်။
3. AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက်မလုပ်မဖြစ်အာကာသအပူပေးစက်: ဒါဟာအိမ်ယာ၏ပြည်တွင်းရေး condensing ကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးခြောက်သွေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုသည်။
Drive ကိုရိုးတံ (မီလီမီတာ)
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Shell ဆိုသည်မှာပူးတွဲချက်တွေ: IP67, IP68 စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်
110 / 220VAC / 1phï¼ 50/60 Hz, A 10% ±
90Â°ï½270Â°á± 10A ° (°90Âကျော်မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးပါ)
စက်မှုhandleï¼ Handwheel optionalï¼ဖြစ်ပါသည်
2 x ကိုပြင်ပချိန်ညှိအဆို့
30W (110 / 220VAC) Anti-ငွေ့ရည်ဖွဲ့
ပြွန် entries တွေကို
AOX-R-003 exceptï¼1.5ï¼2ပိုငျးပိုငျး M18 *
အပူပိုင်းအမှုန့်, Epoxy polyester
Potentionmeter ယူနစ် (1k-10k)
အချိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ယူနစ် (ထိန်းချုပ်ရေး signal ကို 4-20mA, DC / 1-5V / 10V)
ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် (ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုပွင့်လင်း / ရပ်တန့် / နီးကပ် optional ကို switch ကိုဒေသခံ / ဝေးလံခေါင်သီ switch သည်)
လျှပ်စစ်လက်ရှိအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ (Output 4-20mA, DC)
လျင်မြန်စွာဖွင့်ပွဲ (2.8s, 5s, 10s, 15s)
AOX ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator ဥရောပ, အမေရိကတိုက်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအပါအဝင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 companies.If နှင့်အတူအလွန်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-R ကိုစီးရီး၏အရည်အသွေးထက်မြက် rotary လျှပ်စစ် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ Q: စွပ်ဖိနပ်၏နမူနာအချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေးထုတ်ကုန်။
Q: သင့်ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက်အာမခံကာလလား
မေး: ဘယ်နိုင်ငံတွေထံရောင်းချသည်သင်၏ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator ရှိပါသလဲ
A: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဥရောပ, အမေရိကန်, အရှေ့တောင်အာရှ, ရုရှားနှင့်အာဖရိကမှတင်ပို့နှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျ 30 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများကျော်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator1, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်